"ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံ (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၇:၃၀၊ ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၉ ရက်နေ့က မူ
၂၃၃၅ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁၁ နှစ်
၀၄:၅၀၊ ၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၀၈ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၇:၃၀၊ ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၉ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံ (အယ်‌လ်‌ဒီစီ သို့မဟုတ်‌ စတုတ္ထကမ္ဘာ့နိုင်‌ငံ) များသည် ကုလသမဂ္ဂ အဆိုအရ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နှုန်းအနိမ့်ဆုံး
ညွှန်းကိန်းများသာရှိပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအား နှိုင်းယှဉ်ပြသသည့် လူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုညွှန်းကိန်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်
ည္ဝ္ဟန္‌းကိန္‌းမ္ယားသာရ္ဟိ္ရပီး ကမ္ဘာ့နုိင္‌ငံမ္ယားအား န္ဟုိင္‌းယ္ဟဥ္‌ပ္ရသသည္‌့ လူသားဖံ္ဝ.္ရဖုိးတုိးတက္‌မ္ဟုည္ဝ္ဟန္‌းကိန္‌း အဆင္‌့သတ္‌မ္ဟတ္‌ခ္ယက္‌တ္ဝင္‌
အနိမ့်ဆုံး၌ရှိသောနိုင်ငံများ ဖြစ်သည်။ မှတ်ကျောက်စံနှုန်းသုံးမျိုးတွင် ဝင်ပါက တိုင်း ပြည်တစ်ပြည်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အနိမ့်ဆုံးတိုင်း ပြည် စာရင်းဝင် အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
အနိမ့္‌ဆုံး၌ရ္ဟိသောနုိင္‌ငံမ္ယား ဖ္ရစ္‌သည္‌။ မ္ဟတ္‌ကေ္ယာက္‌စံန္ဟုန္‌းသုံးမ္ယုိးတ္ဝင္‌ ဝင္‌ပာက တုိင္‌း ္ရပည္‌တစ္‌ပ္ရည္‌ကုိ ဖံ္ဝ.္ရဖုိးတုိးတက္‌မ္ဟု အနိမ္‌့ဆုံးတုိင္‌း ္ရပည္‌ စာရင္‌းဝင္‌
-ဝင်ငွေနိမ့်ကျခြင်း (တစ်ဦးချင်းတစ်နှစ်ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅ဝ ထက်နည်း ခြင်း)
-ဝင္‌ငေ္ဝနိမ္‌့က္ယခ္ရင္‌း (တစ္‌ဦးခ္ယင္‌းတစ္‌န္ဟစ္‌ဝင္‌ငေ္ဝအမေရိကန္‌ဒော္‌လာ ၇၅ဝ ထက္‌နည္‌း ္ရခင္‌း)
-လူသားအရင်းအမြစ် အားနည်း ခြင်း (အာဟာရ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် သက်ကြီးစာတတ်မြောက်နှုန်း)
-လူသားအရင္‌းအမ္ရစ္‌ အားနည္‌း ္ရခင္‌း (အာဟာရ၊ က္ယန္‌းမာရေး၊ ပညာရေးန္ဟင္‌့ သက္‌က္ရီးစာတတ္‌မေ္ရာက္‌န္ဟုန္‌း)
-စီးပွား ရေးအားနည်းမှု (စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမတည်ငြိမ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတင်ပို့မှု မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ အစဉ်အလာမဟုတ်သည့်
-စီးပ္ဝားေရးအားနည္‌းမ္ဟု (စုိက္‌ပ္ယုိးထုတ္‌လုပ္‌မ္ဟုမတည္‌္ရငိမ္‌ခ္ရင္‌း၊ ထုတ္‌ကုန္‌တင္‌ပုိ့မ္ဟုန္ဟင္‌့ ဝန္‌ဆောင္‌မ္ဟုတင္‌ပုိ့မ္ဟု မတည္‌္ရငိမ္‌ခ္ရင္‌း၊ အစဥ္‌အလာမဟုတ္‌သည့္‌
စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အရေးပါခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုစုစည်း ခြင်း၊ စီးပွား ရေးသေးငယ်မှုကြောင့် အဟန့်အတား ဖြစ်ခြင်း၊
စီးပ္ဝားေရးလုပ္‌ငန္‌းမ္ယား၏ အရေးပာခ္ရင္‌း၊ ထုတ္‌ကုန္‌ပစ္စည္‌းထုတ္‌လုပ္‌မ္ဟုစုစည္‌း ္ရခင္‌း၊ စီးပ္ဝားေရးသေးငယ္‌မ္ဟုကေ္ရာင္‌့ အဟန္‌့အတား ္ရဖစ္‌ခ္ရင္‌း၊
သဘာဝဘေးဒဏ် ကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ပြေးရ သော လူဦး ရေ ရာခိုင်နှုန်း)
သဘာဝဘေးဒဏ္‌ ကေ္ရာင္‌့ အုိးအိမ္‌စ္ဝန္‌့ပေ္ရးရ ေသာ လူဦးေရ ရာခုိင္‌န္ဟုန္‌း)
အဆိုပါ အယ်လ်ဒီစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အနိမ့်ဆုံး အဆင့်စံသတ်မှတ်ချက်ကို ကျော်လွှားနိုင်လျှင် နိုင်ငံသည် အဆင့်အတန်းတက်နိုင်သည်။
အဆုိပာ အယ္‌လ္‌ဒီစီ ဖံ္ဝ.္ရဖုိးတုိးတက္‌မ္ဟု အနိမ္‌့ဆုံး အဆင္‌့စံသတ္‌မ္ဟတ္‌ခ္ယက္‌ကုိ ကေ္ယာ္‌လ္ဝ္ဟားနုိင္‌လ္ယ္ဟင္‌ နုိင္‌ငံသည္‌ အဆင့္‌အတန္‌းတက္‌နုိင္‌သည္‌။
ကုလသမ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံများ၊ ကုန်းတွင်းပိတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနှင့် သေးငယ်သည့် ကျွန်းနိုင်ငံများဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးက
ကုလသမ ဖံ္ဝ.္ရဖုိးမ္ဟု အနိမ္‌့ဆုံးနုိင္‌ငံမ္ယား၊ ကုန္‌းတ္ဝင္‌းပိတ္‌ဖံ္ဝ.္ရဖုိးဆဲနုိင္‌ငံမ္ယားန္ဟင္‌့ သေးငယ္‌သည့္‌ ကယ္ြန္‌းနုိင္‌ငံမ္ယားဆုိင္‌ရာ မဟာမင္‌း ္ရကီးရုံးက
ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံများအား ကုလသမဂ္ဂ မှ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ အားပေးခြင်းကိစ္စများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ဖံ္ဝ.္ရဖုိးမ္ဟုအနိမ္‌့ဆုံးနုိင္‌ငံမ္ယားအား ကုလသမ မ္ဟ ထောက္‌ပံ့ခ္ရင္‌း၊ အား ေပး ္ရခင္‌းကိစ္စမ္ယားကုိ ကူညီဆောင္‌ရ္ဝက္‌ပေးသည္‌။
လက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၅ဝ ခန့် ဤသတ်မှတ်ချက်စံအတွင်းဝင်သည်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် အတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှု အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံမှာ အရှေ့တီမောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
လက္‌ရ္ဟိနုိင္‌ငံပောင္‌း ၅ဝ ခန္‌့ ဤသတ္‌မ္ဟတ္‌ခ္ယက္‌စံအတ္ဝင္‌းဝင္‌သည္‌။ ၂ဝဝ၆ ခုန္ဟစ္‌ အတ္ဝက္‌ ဖံ္ဝ.္ရဖုိးမ္ဟု အနိမ္‌့ဆုံးနုိင္‌ငံမ္ဟာ အရေ္ဟ.တီမောနုိင္‌ငံဖ္ရစ္‌သည္‌။
ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံများကို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်း သော နိုင်ငံများ၊ ပို၍ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်း သော နိုင်ငံများ တစ်နည်း 'တတိယကမ္ဘာ'
ဖံ္ဝ.္ရဖုိးမ္ဟုအနိမ္‌့ဆုံး နုိင္‌ငံမ္ယားကုိ ဖံ္ဝ.္ရဖုိးဆဲနုိင္‌ငံမ္ယား၊ ဖံ္ဝ.္ရဖုိးမ္ဟုနည္‌း ေသာ နုိင္‌ငံမ္ယား၊ ပုိ၍ ဖံ္ဝ.္ရဖုိးမ္ဟုနည္‌း ေသာ နုိင္‌ငံမ္ယား တစ္‌နည္‌း 'တတိယကမ္ဘာ'
နိုင်ငံများနှင့် ခွဲခြားနိုင်သည်။ ခေတ်ပြိုင်ပညာရှင်အချို.က 'တတိယကမ္ဘာ' ဟူသည့် စကားလုံးသည် ခေတ်မမီတော့ခြင်း၊ အကျုံးမဝင်တော့ဟု ဆိုသည်။
နုိင္‌ငံမ္ယားန္ဟင္‌့ ခဲ္ဝခ္ရားနုိင္‌သည္‌။ ခေတ္‌္ရပုိင္‌ပညာရ္ဟင္‌အခ္ယုိ.က 'တတိယကမ္ဘာ' ဟူသည့္‌ စကားလုံးသည္‌ ခေတ္‌မမီတော့ခ္ရင္‌း၊ အက္ယုံးမဝင္‌တော့ဟု ဆုိသည္‌။
အခြား သူများကလည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံများကို 'စတုတ္ထကမ္ဘာ' ဟူသည့် ဝေါဟာရကို သုံးနှုန်း ပေလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံး
အခ္ရား သူမ္ယားကလည္‌း ဖံ္ဝ.္ရဖုိးမ္ဟုအနိမ္‌့ဆုံးနုိင္‌ငံမ္ယားကုိ 'စတုတ္ထကမ္ဘာ' ဟူသည္‌့ ဝောဟာရကုိ သုံးန္ဟုန္‌း ေပလိမ္‌့မည္‌။ သုိ့သော္‌လည္‌း ဖံ္ဝ.္ရဖုိးမ္ဟုအနိမ့္‌ဆုံး
နိုင်ငံနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်း သော နိုင်ငံနှစ်မျိုးစလုံးကို အယ်လ်ဒီစီဟု ဖော်ပြ လေ့ရှိပြီး ကုန်းတွင်းပိတ်တိုင်း ပြည်များအား 'အယ်လ်အယ်လ်ဒီစီ' (LLDC)
နုိင္‌ငံန္ဟင္‌့ ဖံ္ဝ.္ရဖုိးမ္ဟု နည္‌း ေသာ နုိင္‌ငံန္ဟစ္‌မ္ယုိးစလုံးကုိ အယ္‌လ္‌ဒီစီဟု ဖော္‌ပ္ရ ေလ့ရ္ဟိ္ရပီး ကုန္‌းတ္ဝင္‌းပိတ္‌တုိင္‌း ္ရပည္‌မ္ယားအား 'အယ္‌လ္‌အယ္‌လ္‌ဒီစီ' (LLDC)
ဟု ပြသကြသည်။ 'ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်း ပြည်' ကို ယေဘုယျအား ဖြင့် 'ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံး' ဟူသည့် အသုံးနှုန်းထက် ပို၍နှစ်သက်ကြသည်။
ဟု ပ္ရသက္ရသည္‌။ 'ဖံ္ဝ.္ရဖုိးဆဲတုိင္‌း ္ရပည္‌' ကုိ ယေဘုယ္ယအား ္ရဖင္‌့ 'ဖံ္ဝ.္ရဖုိးမ္ဟုအနိမ္‌့ဆုံး' ဟူသည့္‌ အသုံးန္ဟုန္‌းထက္‌ ပုိ၍န္ဟစ္‌သက္‌က္ရသည္‌။
ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံနိုင်ငံများသည် ယေဘုယျအား ဖြင့် အလွန်အကျွံဆင်းရဲခြင်းကို ခံစားရပြီး ကျယ်ပြန့်၍ လတ်တလောပဋိပက္ခ (ပြည်တွင်းစစ်သို့မဟုတ် လူမျိုး ရေး စစ်ပွဲများ)၊ နက်ရှိုင်းသည့် နိုင်ငံရေးခြစားမှုနှင့် နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးတည်ငြိမ်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းများကိုပါ တွေ့ရသည်။
ဖံ္ဝ.္ရဖုိးမ္ဟုအနိမ္‌့ဆုံနုိင္‌ငံမ္ယားသည္‌ ယေဘုယ္ယအား ္ရဖင္‌့ အလ္ဝန္‌အကယ္ြံဆင္‌းရဲခ္ရင္‌းကုိ ခံစားရ္ရပီး က္ယယ္‌ပ္ရန္‌့၍ လတ္‌တလောပဋိပက္ခ (ပ္ရည္‌တ္ဝင္‌းစစ္‌
အစိုးရမှာလည်း ဤကဲ့သို့သော တိုင်း ပြည်များတွင် ဗဟိုမှထိန်းချုပ်သောပုံစံ၊ အာဏာရှင်အပါအဝင်နှင့် စစ်ဦးစီးဝါဒ သို့မဟုတ် စောရနက္ခမင်း
သုိ့မဟုတ္‌ လူမ္ယုိးေရးစစ္‌ပဲ္ဝမ္ယား)၊ နက္‌ရ္ဟုိင္‌းသည့္‌ နုိင္‌ငံရေးခ္ရစားမ္ဟုန္ဟင့္‌ နုိင္‌ငံရေးန္ဟင္‌့ လူမ္ဟုရေးတည္‌္ရငိမ္‌မ္ဟု ကင္‌းမဲ့ခ္ရင္‌းမ္ယားကုိပာ တေ္ဝ.ရသည္‌။
အုပ်ချုပ်သည့် အစိုးရမျိုး ဖြစ်နေတတ်သည်။ အယ်လ်ဒီစီနိုင်ငံအများစုမှာ ဆာဟာရအတွင်းပိုင်း အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် တည်ရှိသည်။ ကုလသမဂ္ဂ က ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် သုံးသပ်ရာဝယ် ကုလသမဂ္ဂ ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၌အယ်လ်ဒီစီဖြစ်ဖို့ရန် စံသတ်မှတ်ချက် သုံးချက်နှင့် ကိုက်ညီရမည်ဟု ဆိုထားသည်။ သုံးနှစ်ပျမ်းမျှ တစ်ဦးချင်း တစ်နှစ်စုစုပေါင်းဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅ဝ ထက် လျော့နည်းရမည်ဖြစ်သည်။ လူဦး ရေ ၇၅သန်းနှင့်အထက် နိုင်ငံများအား ချန်လှပ် ထား လေသည်။
အစုိးရမ္ဟာလည္‌း ဤကဲ့သုိ့သော တုိင္‌း ္ရပည္‌မ္ယားတ္ဝင္‌ ဗဟုိမ္ဟထိန္‌‌းခ္ယုပ္‌သောပုံစံ၊ အာဏာရ္ဟင္‌အပာအဝင္‌န္ဟင့္‌ စစ္‌ဦးစီးဝာဒ သုိ့မဟုတ္‌ စောရနက္ခမင္‌း
အုပ္‌ခ္ယုပ္‌သည့္‌ အစုိးရမ္ယုိး ဖ္ရစ္‌နေတတ္‌သည္‌။ အယ္‌လ္‌ဒီစီနုိင္‌ငံအမ္ယားစုမ္ဟာ ဆာဟာရအတ္ဝင္‌းပုိင္‌း အာဖရိကနုိင္‌ငံမ္ယားတ္ဝင္‌ တည္‌ရ္ဟိသည္‌။ ကုလသမ က
၂ဝဝ၃ ခုန္ဟစ္‌တ္ဝင္‌ ပ္ရန္‌လည္‌ သုံးသပ္‌ရာဝယ္‌ ကုလသမဂ္ဂ ၏ အဓိပ္ပာယ္‌ဖ္ဝင္‌့ဆုိခ္ယက္‌၌အယ္‌လ္‌ဒီစီဖ္ရစ္‌ဖုိ့ရန္‌ စံသတ္‌မ္ဟတ္‌ခ္ယက္‌ သုံးခ္ယက္‌န္ဟင္‌့ ကုိက္‌ညီရမည္‌ဟု
ဆုိထားသည္‌။ သုံးန္ဟစ္‌ပ္ယမ္‌းမ္ယ္ဟ တစ္‌ဦးခ္ယင္‌း တစ္‌န္ဟစ္‌စုစုပောင္‌းဝင္‌ငေ္ဝ အမေရိကန္‌ဒော္‌လာ ၇၅ဝ ထက္‌ လေ္ယာ့နည္‌းရမည္‌ဖ္ရစ္‌သည္‌။ လူဦးေရ ၇၅သန္‌းန္ဟင္‌့အထက္‌ နုိင္‌ငံမ္ယားအား ခ္ယန္‌လ္ဟပ္‌ ထား ေလသည္‌။
မကြာသေးမီက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲဟု သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဗလျူတီအို ဒိုဟာ ဆွေးနွေးပွဲများ ပျက်ပြားသွားသဖြင့် ကမ္ဘာလုံး
မက္ရာသေးမီက ဖံ္ဝ.္ရဖုိးတုိးတက္‌မ္ဟုဆုိင္‌ရာ ဆေ္ဝး ေန္ဝးပဲ္ဝဟု သတ္‌မ္ဟတ္‌ထားသည့္‌ ဒဗလ္ယူတီအုိ၏္‌ဒုိဟာ ဆေ္ဝး ေန္ဝးပဲ္ဝမ္ယား ပ္ယက္‌ပ္ရားသ္ဝားသဖ္ရင္‌့ ကမ္ဘာလုံး
ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး စည်းမျဉ်းများနှင့် အယ်လ်ဒီစီများ၏ ကိစ္စမှာ မီဒီယာသတင်း လောကနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာတို့၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို တိုး၍ရရှိလာသည်။
ဆုိင္‌ရာ ကုန္‌သ္ဝယ္‌ရေး စည္‌းမ္ယဥ္‌းမ္ယားန္ဟင္‌့ အယ္‌လ္‌ဒီစီမ္ယား၏ ကိစ္စမ္ဟာ မီဒီယာသတင္‌း ေလာကန္ဟင္‌့ မူဝာဒဆုိင္‌ရာတုိ့၏ အာရုံစူးစုိက္‌မ္ဟုကုိ တုိး၍ရရ္ဟိလာသည္‌။
ဟောင်ကောင်တွင် ကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးအဖွဲ. ဆွေး နွေးပွဲများသာ အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်နိုင်ပါက အယ်လ်ဒီစီနိုင်ငံများသည် အမေရိကန်
ေ ဟာင္‌ကောင္‌တ္ဝင္‌ က္ယင္‌းပသည္‌့ ဝန္‌က္ရီးအဖဲ္ဝ. ဆေ္ဝး ေန္ဝးပဲ္ဝမ္ယားသာ အောင္‌မ္ရင္‌စ္ဝာ အဆုံးသတ္‌နုိင္‌ပာက အယ္‌လ္‌ဒီစီနုိင္‌ငံမ္ယားသည္‌ အမေရိကန္‌
ဈေးကွက်အား ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း အကောက်ခွန်လွတ်ငြိမ်းခွင့်နှင့် ခွဲတမ်း ဝေစု ကင်းလွတ်ခွင့်တို့ ရရှိစေမည်ဟု သဘောတူကြသည်။ အင်ဂျီအိုများ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ချက်အရမူ အယ်လ်ဒီစီတို့ တင်ပြသည့် စာပိုဒ်တွင် ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မရရှိသည့် အပြင် အယ်လ်ဒီစီနိုင်ငံများမှ
ဈေးက္ဝက္‌အား ၁ဝဝ ရာခုိင္‌န္ဟုန္‌း အကောက္‌ခ္ဝန္‌လ္ဝတ္‌္ရငိမ္‌းခ္ဝင္‌့န္ဟင္‌့ ခဲ္ဝတမ္‌းေဝစု ကင္‌းလ္ဝတ္‌ခ္ဝင္‌့တုိ့ ရရ္ဟိစေမည္‌ဟု သဘောတူက္ရသည္‌။ အင္‌ဂ္ယီအုိမ္ယား၏
လက်ရှိခံစားရရှိပြီး ဖြစ်သော အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုပင် ဆုံးရှုံးနိုင်သေး ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ခဲ္ဝခ္ရမ္‌းစိတ္‌ဖ္ရာ သုံးသပ္‌ခ္ယက္‌အရမူ အယ္‌လ္‌ဒီစီတုိ့ တင္‌ပ္ရသည့္‌ စာပုိဒ္‌တ္ဝင္‌ ၁ဝဝ ရာခုိင္‌န္ဟုန္‌း ္ရပည့္‌မရရ္ဟိသည့္‌ အပ္ရင္‌ အယ္‌လ္‌ဒီစီနုိင္‌ငံမ္ယားမ္ဟ
လက္‌ရ္ဟိခံစားရရ္ဟိ္ရပီး ္ရဖစ္‌သော အကောက္‌ခ္ဝန္‌ကင္‌းလ္ဝတ္‌ခ္ဝင္‌့ကုိပင္‌ ဆုံးရံ္ဟုးနုိင္‌သေး ေက္ရာင္‌း တေ္ဝ.ရ္ဟိရသည္‌။
'''အာရ္ဟအာရှ (၁ဝ) နုိင္‌ငံနိုင်ငံ'''
'''အာဖရိက (၃၄) နုိင္‌ငံနိုင်ငံ'''
'''အိုရှင်းနီးယား (၅ နိုင်ငံ)'''
'''အုိရ္ဟင္‌းနီးယား (၅ နုိင္‌ငံ)'''
'''အမေရိက (၁ နုိင္‌ငံနိုင်ငံ)'''
-ေဟတီ
[[de:Least Developed Countries]]
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/31543" မှ ရယူရန်